#माधव ढुङ्गेल Archives - Left Review Online
Tag: #माधव ढुङ्गेल
क. माधव ढुङ्गेल २०७६ भदौ १९ गते बिहीवार
यो मोबाइल पनि के किनिएछ जिन्दगीमा । स्विच अन गर्दा पनि गाली खानु, अफ गर्दा पनि गाली नै खानु । गाली खानकै लागि मोबाइल चाहिएला भन्ने त पहिले कल्पनै गरेको थिइनँ । सुरुमा मोबाइल भनेपछि कत्रो तिर्सना । सायद एउटा हिन्दी सिरियलमा पहिलो चोटि मैले मोबाइल देखेको थिएँ...बाँकी
#Madhab Dhungel#Mobile#निबन्ध#माधव ढुङ्गेल#मोबाइल
क. माधव ढुङ्गेल २०७६ भदौ ७ गते शनिवार
एउटा अन्तर्वार्ता पढेको थिएँ । सइद मिर्जाको वार्ता थियो । उनी भारतीय नागरिक हुन् र पेसाले चलचित्र निर्देशन गर्छन् । टेलिभिजन च्यानलको चर्चा गर्दै उनले वार्तामा भनेका छन्— इन्डियालाई एउटा प्रोपोगान्डा चाहिन्छ । कुनै न कुनै हङ्गामा चाहिन्छ । कहिले मिलेनियर, कहिले वर्ल्ड कप, कहिले इन्डियन आइडल वा...बाँकी
#इन्डियन आइडल#कौन बनेगा करोडपति#माधव ढुङ्गेल#हेडफोन
क. माधव ढुङ्गेल २०७६ साउन १ गते बुधवार
धेरै बिक्ने वस्तुहरूमा खैनी, चुरोट र रक्सीहरू पनि छन् । मोबाइल र हतियारहरू छन् । विदेश गएर फर्केकाहरू भन्छन्, युवतीको शरीर पनि धेरै बिक्नेमा पर्छ रे । हलिवुड सिनेमाहरूले यौन मात्रै होइन, हिंसा, त्रास र सपना पनि बेच्छन् रे । यसमा बलिवुड पनि कम छैन । नेपालमा अर्धनग्न...बाँकी
#Madhav Dhungel#Market#Popularity#निबन्ध#बजार शास्त्र#माधव ढुङ्गेल#राजेश हमाल#रेखा थापा#लोकप्रियता
क. माधव ढुङ्‍‌गेल २०७५ चैत १६ गते शनिवार
नरम उज्यालो । मन्द सुगन्ध । मैन मसँग धेरै समय सँगै हुन्छ तर यो मबाट टाढा भएको रहेछ । सँगै भएका धेरै कुरा मबाट टाढा रहेछन्, जस्तै– पत्नीभित्रको मातृत्व, बाबुआमाको प्रताडना र सन्तानहरुको स्वायत्तता । मैले मैनलाई यसरी कहिल्यै हेरेको रहेनछु । मैनको मौन संवाद कहिल्यै सुनेको रहेनछु...बाँकी
#कछुवा#कुखुरा#माधव ढुङ्गेल#मैनसँग एकरात
क. माधव ढुङ्गेल २०७५ कात्तिक ५ गते सोमवार
मभित्र एउटा डर छ । नेपाली नागरिक भएको हैसियतले मैले न्याय पाउँछु नै भन्ने विश्वास छैन । मेरो घर अर्काले डोजर लाएर लडाइदियो भने पनि म गर्न के सक्छु होला र ? मेरा बच्चालाई चोरेर मृगौला बेचिदियो भने पनि गर्न के सक्छु होला ? वा मेरो मिल्दो अनुहारलाई...बाँकी
#Desh#Madhav Dhungel#Nepal#निबन्ध#बुझ्न नसकेको देश#माधव ढुङ्गेलनेपाल